🥇 ▷ Microsoft Waxay Ka Fududeysaa In Aad Ka Hesho Qoraal Bog Weyn Bogagga Ugu Danbeeya ee Ku-saleysan-ka-Jirka ✅
Microsoft Waxay Ka Fududeysaa In Aad Ka Hesho Qoraal Bog Weyn Bogagga Ugu Danbeeya ee Ku-saleysan-ka-Jirka
Waxay umuuqataa sida tabarucyada Microsoft ee mashruuca chromium ay faa iido badan u siineyso daalacashada internetka ee kusalaysan Chromium. Muuqaal cusub oo isugeyn ah ayaa lagu soo bandhigay Canary nooca loo yaqaan ‘Chromium Edge based’ kaas oo kuu ogolaanaya inaad si sahlan uga raadsato qoraalka bogga.
Ilaa hada, si loo helo qoraal ama loo helo dhacdooyin qoraal meelo kala duwan oo bogg internet ah, waa inaan kuqorno ereyga raadinta ee ka muuqda santuuqa qoraalka marka aad riixeyso. Ctrl + F ama cinwaanka Raadi goobaha biraawsarka. Akhlaaqdaas ayaa loo fududeyn doonaa sida biraawsarka si toos ah u qaad qoraalka la soo xulay oo ku dheji sanduuqa raadinta adigoon u baahnayn isticmaaleha inuu gacanta ku qabto.
Tani waxay u muuqan kartaa sidii isbeddel yar laakiin wuxuu beddeli doonaa khibradda isticmaalaha heerka aasaasiga ah. Ilaa hadda, muuqaalka waxaa laga heli karaa Edge Canary iyo Chrome Canary. Anigu shaqsi ahaan waan ka fiiriyay astaamaha labadaba daalacashada websaydhada waxaana dareemay inay aad uga wanaagsan yihiin hirgalinta hada.
“Waqtiga xaadirka ah, sanduuqa raadintu wuxuu tixgeliyaa taariikhdiisa gaar ahaan marka la furayo, laakiin mararka qaarkood adeegsadaha ayaa xulo eray ku yaal bogga wuxuuna rajeynayaa inuu raadsado tusaalayaal dheeraad ah (gaar ahaan markii la fiirsanayo koodhka isha). clip ”, isbedelkani wuxuu tixgelinayaa xulashada qoraalka firfircoon (haddii ay jiraan) goorta la helo
widget-ka waa la casuumay.,, Wuxuu akhriyaa farriinta ballanqaadka ah ee loo yaqaan “Chromium Gerrit”.
Muuqaalka ayaa si fudud looga heli karaa dhismaha Canary taas oo macnaheedu yahay inaadan u dulqaadan doonin dhibaatada raadinta iyo awood u siinta mid kasta oo ka mid ah calanka Chrome si aad u hesho astaamaha. Haddii aadan ka warqabin, waxaad si fudud ugu beddeli kartaa dhacdada xigta ee raadinta adigoo riixaya Ctrl + G. Fiiri fiidiyaha hoose ee aan duubay si aad u daawato muuqaalka ficil ahaan.
Waqtiga qoraalka qoraalkan, muujinta kuma jirto channelka Edge Dev. Waxaan rajeynayaa in muuqaalka uusan keenin wax xasilooni xasilooni ah oo uu qaan gaadho oo lagu daro cusboonaysiinta soo socota ee Google Chrome.
Marka, maxay kula tahay hirgelinta cusub? Nala soo socodsii faallooyinka hoose.
Soo dejiso Kariin ku-saleysan Maaddada ‘Chromium’ Edge Canary | Kalasoco Canary Chrome